CBD umusi Liquid
CBD umusi ketshezi
CANNAPRESSO CBD E 1000mg ketshezi uwoyela CBD 10ml vape
CANNAPRESSO CBD E ketshezi-1000mg uwoyela CBD 15ml vape
CANNAPRESSO CBD E ketshezi-300mg uwoyela CBD 15ml vape
Inani: $ 22,98
Uhlobo Bottle: Plastic, ingane-ubufakazi ibhodlela
Izithako Main: Ionized Water, CBD Crystal
CBD amandla: 10mg
Okufakiwe Ukucaciswa: Boxed e 5 Bottle
CBD amanzi usebenzisa lamanzi esiphethu futhi CBD zinhlayiya, ukusetshenziswa ku atomizer yezokwelapha, ukulapha aerosol.
Cannapresso CBD Water kuba umkhiqizo ezintsha Ngasekuqaleni kwaleli khulu leminyaka ukuthi abantu. izithako zako ezisemqoka ezisetshenzisiwe okumsulwa 99,5% zinhlayiya CBD (ngaphandle iTHC) namanzi ionized.
Ubuchwepheshe Ukhiye ukuhlanganisa ubuchwepheshe anezikhala of CANNAPRESSO ethize anezikhala nebulizer (umkhiqizo lobunikazi ka-FDA 510k test idivayisi yezokwelapha), nebulizing at 0.4-0.5 ml / imiz atomization izinga ngokusebenzisa ultrasound tech at 130KHz imvamisa Vibration, esikhiqiza 2.5 μm isikhungo aerosol kuyizinhlayiyana ngqo mucosa wamaphaphu ukuzigcina egxile.
Lokhu ubuchwepheshe esiyingqayizivele elondoloza kahle CBD bioactivity zemvelo, okuzokwenza abantu kufanele uzizwe kungokwemvelo CBD nobungqabavu kanye ukuthola ubungqabavu elikhazimulayo.
Previous: CANNAPRESSO CBD E ketshezi-1000mg uwoyela CBD 15ml vape
Olandelayo: CBD amanzi 10ml 50mg CBD
Kuhle CBD Oil
Kuhle CBD Vape Oil
Thenga CBD Amafutha
Thenga CBD Vape Oil
CBD uwoyela Hemp
CBD Hemp Amafutha Vape
CBD Amafutha Izinzuzo
CBD Amafutha Thenga
CBD Amafutha Effects
CBD Amafutha For Sale
CBD amafutha Ukuze Vape
CBD Amafutha Legal
CBD Amafutha Vape Juice
CBD Amafutha Vape Ipeni
CBD uwoyela vape
CBD Vape Amafutha ubumnandi
Oil Vape Ipeni
Uyini CBD Oil
Isitolo esidayisa yonke impahla Vape Oil
CBD amanzi 10ml 50mg CBD